SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 42aad safarkii afaraad ee Sindibad iyo markii nolosha lagu duugay. – Filimside.net
Taariikhda: February 4, 2019
Sheekada qeybtii hore waxay noo mareysay markii uu ninkii naagtiisa ka dhimatay uu ii sheegay in dadka jaziiradaan ku nool ay dhaqan iyo caado u leeyihiin in hadii ninka ama naagta uu midkood dhinto kan kalana laga daba geeyo oo labadoodaba hal qabri lagu duugo.
Aniga waxaan ku fikirayay in aan dhimasho ka badbaaday laakiin waxaan ogaaday in dhimashada noocaan oo ah in nolosha lagugu duugo ay ka dhib badantahay wax badan midi hore.
Ninkii miskiinka ahaa ee xaaskiisa ka dhimatay sidii ayaa lagu duugay oo asiga iyo xaaskiisa hal qabri ayaa lawada galiyay.
Anigoo kurbeysan ayaan soo baxay waxaana u imid boqorkii markaas ayaan bilaabay inaan arinta kala hadlo una sheego in ay dhaqan aan fiicneyn tahay, boqorkii ayaase ii sheegay in caadadaan ay kasoo gaareen awoowayaashoodii hore isla markaasna aysan waxba ka badali Karin.
Markaas ayaan ku dhahay hadii uu qof qariib ah oo aan kamid aheyn dadka jaziiradaan ku nool uu xaas ka guursado sideyda oo kale kadibna xaaskiisa dhimato asigana Malaga daba duugaa oo dhaqankaan miyuu maraa?
Boqorkii oo fahmay ujeedada hadalkeyga ayaa inta dhoosha ka qoslay igu dhahay; haa xeerka iyo dhaqanka ayaa asigana qabanaayo oo waa laga daba duugaa.
Markaas ayaan bilaabay inaan dareemo walwal iyo kurbo hor leh waxaana ku duceystay in xaaskeyga aysan dhiman horteyda oo aan aniga kahor dhinto intii nolosha la igu duugi lahaa hase yeeshee qadarta rabi cid hor istaagi karto malahan waxaa dhacday in xaaskeygii ay xanuunsato maalmo kadibna geeriyooto.
Markaas ayay dadkii bilaabeen iney ii yimaadaan iina tacsiyeeyaan sidoo kalana u tacsiyeeyaan ehelkii ay xaaskeyga ka dhimatay waxaa sidoo kale ii yimid si uu iigu tacsiyeeyo boqorkii jaziirada.
Kadib waxay bilaabeen iney meyraan meydkii xaaskeyga anigana shook iyo yaab daraadiis aan lahadli la’ahay, markii ay u meyreen ayay u labiseen dhar noocii ugu quruxda badnaa iyagoo sidoo kalana ku qurxiyayuna xiray dahab dheyman iyo waxkasta oo la isku qurxiyo sidoo kalana aad u carfiyay waxaana la galiyay qabrigii.
Markii ay xaaskeyga qabriga galiyeen ayay aniga dhankeyga soo aadeen si ay ii sagootiyaan markaas ayaan qeylo af labadii yeeray anigoo leh; aniga waxaan ahay qof qariib ah mana kamid ihi dadka jaziiradaan ku nool ee nolosha ha igu duugina dhaqankiina adinkuu idiinku gaaryahay aniga iska key daaya.
Laakiin aniga lee cabaadayay waayo majiro qof inuu hadalkeyga dhag jalaq u siiyo iska daayee qof isoo fiirisay xitaa ma arkin.
Kadib ayay bilaabeen in ay xarig dhexda iiga xiraan waxay sidoo kale jeebabka iiga buuxiyeen muufo iyagoo caagad biyana ii dhiibay markaas ayay i kor geeyeen qabrigii xaaskeyga ay ku jirtay.
Yaa ilaahii dhirir badanaa waxaad moodaa inuu yahay ceel dheer siduu u dheeraa owgeed markaas ayay si xoog ah qabrigii ii galiyeen markii aan qabriga salkiisa tagay ayay I dhaheen xariga soo fur hase yeeshee ma aanan sameyn, markaas ayay xarigii oo dhan igu soo daayeen kadibna qabrigii kor ka owdeen meeshii godka aheyd misna mugdiga badneyd ee meydka yaalayna igu duugeen.
Qabriga dhexdiisa wuxuu ahaa mid aad u waasac ah sidoo kalana waxaa meesha daadsanaa meydad fara badan waxaana ogaaday in uu yahay qabri wadareed oo qofkasta oo dhinto halkaan lagu soo tuuro .
Godka aan ku jiro mugdigiisa waxaa ka daran urkiisa waayo waxaa dhex daadsan oo dhex buuxo wixii meyd ahaa oo dhami ma aheyn urkood wax loo adkeysan karay.
Qabrigii ayaan iska dhex fariistay anigoo yaqiinsaday toogtaan shaki la’aan inaan dhimanaayo hadii aan gaajo u dhimana urkaan dartiis iyo hawadaan xun owgeed u dhimanaayo.
Waxaan bilaabay inaan muufadii cuno biyihii aan watayna qeyb yar ka daba cabo si intii awoodeyda ah usii noolaado.
Waxaan halkii ku jiray maalmo maalintii dambe ayaan anigoo aad u tabar daran misna oon daran ihaayo ayaan waxaan maqlay shanqar waxyar kadibna waxaaba la furay albaabkii qabrigana waxaana markii ugu horeysay arkay iftiinkii aduunyada waxaana isoo gashay neecow qabow waxaanse ka cabsaday hadii ay I arkaan iney I dilaan markaas ayaan is qariyay oo aan dhuuntay.
Hase yeeshee waxay godkii qabriga ahaa kusoo rideen nin iyo naagtiisa iyadoo naagta ay meyd aheyd ninkana uu sideyda oo kale uu xariga ku xirnaa wax yar kadibna godkii ayay markale afka ka owdeen halkiina nagu duugeen.
Ninkii markii uu godka soo dhex galay isla markaasna qabirgii nalagu daboolay ayuu bilaabay inuu darbiyada garaaco asigoo godka darbiga ku wareegsan midkasta jug jug sinayay ilaa uu markii dambe uu mid kamid ah darbiyada qodis ku bilaabay.
Aniga tabar dari iyo baahi ayaa isugu keey darsantay waxaana go’aansaday inaan ninka la hadlo waa intaasoo uu biyo iyo muufo isiiyaaye.
Ninkii oo darbiga qodis ku wado ayaa shanqarteyda dareemay markaas ayuu dhankii shanqarta soo milicsaday markaas ayuu yiri waa kuma?
Waxaan dhahay waa sindibaad oo wali nool ninkii qariibka ahaa ee jaziiradaan kusoo dhumay.
Markaas ayuu xageyga soo aaday kadibna wuxuu igu yiri imaqal hadii aad rabto inaad noolaato, aniga maalmo kahor markii xaaskeyga xanuunsatay isla markaasna aan yaqiinsaday ineey dhimaneyso ayaan godkaan agtiisa god kale ka qoday anigoo mudo habeen dhan qodaayay si hadii ay dhacdo in ay dhimato xaaskeyga oo la I duugo aan nafteyda ula baxsado nasiib xumo sidii aan ka cabsanaayay ayaa dhacday oo xaaskeyga wey dhimatay marka hadii aad rabto inaad bad baado oo noolaato darbigaan ila qod si aan u gaarno godkii aan kaga baxsan laheyn halkaan.
Markaas ayaan ku dhahay waayahay lkn aniga wax tabar mahaayo mudana wax fiican ma cunin, kadib ayuu xoogaa muufo iyo biyo isiiyay markaas ayaan bilownay inaan godkii qodno anagoo waliba gacmaheena adeegsaneynay.
Wixii aan godkii qodnaba nasiib wanaag waxaan soo gaarnay oo aan aragnay godkii kale kaasoo ahaa godkii uu diyaariyay ninkii qabriga igula jiray markaas ayaan aad u faraxnay waxaana damacnay inaan baxno.
Markas ayaan saaxiibkey ku dhahay imaqal anaga hada godkaan waan ka badbaadnay lkn wax xoolo ah maheysano marka maan qaadano oo uruursano dahabka iyo dheymanka meydadka lagu soo xardhay si aan ugu badbaadno?
Waxay noqotay fikrad aad u fiican markaas ayaan bilownay inaan meydadkii oo dhan wixii dahab iyo dheyman u xirnaa aruursano anagoo ka buuxsanay maryihii ay meydadka wateen kadibna godkii ayaan kasoo baxnay anagoo imaanay xeebta jaziiradii aan joognay waxaana halkii kasoo raacnay doon yar oo ninkii sxbkey ahaa uu meesha ku diyaariyay bada ayaana isku sii deynay.
Wixii aan in mudo ah socono nasiib wanaag waxaan markii dambe aragnay oo la kulanay markab aad u weyn waxaana bilownay inaan markabkii u gacmo haatino ilaa aan ugu dambeyn kasoo gaarnay.
Aniga iyo saaxiibkey wixii dahab ee aan helnay waan kala qeybsanay wuxuuna ahaa dahab aad u tiro badan anagoo markabkii in mudo ah ku nasanay kadibna nin walbo jidkiisa ayuu ku dhacay intii aan jidka kusoo jirnayna sxbkey waxaan uga sheekeeyay safaradii aan horay u galay iyo wixii dhibaato ee an kala soo kulmay asigoo aad ula tacajabay.
Kadib aniga waxaan usoo jiheystay magaaladeydii aan jeclaa ee baqdaad waxaana soo maray oo in mudo ah ku nastay magaalada basra anigoo isugu hanjabay inaan safar dambe gali doonin.
Markii aan imid baqdaad ayaan dahabkii qeyb kamid ah iibiyay waxaana dib ugu laabtay ehelkeygii kuwaasoo aad ugu farxay aragtideydii.
La soco qeybta 43aad.
Fadlan walal xayaysiimaha webka saran midkasta halmar Click kusii adigoo mahadsan.
Waxaa Aqrisay 1,099